Ganacsato Soomaaliyeed oo Dil iyo dhaawac loogu geystay dalka Koonfur Afrika - Damqo
Ganacsato Soomaaliyeed oo Dil iyo dhaawac loogu geystay dalka Koonfur Afrika
Magaalada Restunburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa xalay lagu dilay Ganacsado Soomaaliyeed,halka mid kalena lagu dhaawacay.
Kooxo hubeysan oo burcad koonfur Afikan ah ayaa la sheegay in Ganacsatada ay ugu tageen goob ganacsi ay ku lahaayeen Magaalada Restunburg ee dalka Koonfur Afrika,isla markaana u geystay weerar isugu jiray dil iyo dhaawac ah.
Ganacsatada la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Allaha u naxariistee Ceydaruus Maxamed Abuukar iyo Cabdullaahi Maxamuud,halka midka la dhaawacay lagu magacaabo Cali Cumaan Malaaq.
Gudoomiyihii hore ee Restunburg Abdirahman Shekh Ukun oo xiliga weerarka uu dhacayay ku sugnaa goobta ayaa sheegay in Kooxo hubeysan oo burcad koonfur Afikan ah ay dileen Muwaadiniinta Soomaaliyeed oo kamid ahaa dadka dalkaasi ku Ganacsada.
7-da bishan Janaayo ee 2019 Ganacsade Soomaaliyeed oo caan ah ayaa waxaa lagu dilay Magaalada Capte Town ee Dalka Koonfur Afrika, waxaana isla goobtii looga dhacay lacag gaareeysa 500,000 Rand (US $36,000).
Dalka Koonfur Afrika ayaa inta badan waxaa lagu dilaa Ganacsatada Soomaaliyeed,waana dilkii labaad ee laba todobaad gudahood dalka Koonfur Afrika loogu geysto Ganacsato Soomaaliyeed.
Previous Dib u dhac ku yimid kulan maanta la filayay in uu yeesho Golaha Shacabka
Next Shil Naxdin leh oo saakay ka dhacay Muqdisho